Sprinklr: Ntinye aka na nchekwa ọha maka ụlọ ọrụ | Martech Zone
Sprinklr: Ntinye ego na nchekwa maka ụlọ ọrụ
Wenezdee, Machị 6, 2013 Douglas Karr
Corlọ ọrụ ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ nsogbu chọrọ ka ngwaahịa ha mepụtara n'ụzọ dị iche. Ngwa ntinye aka nwere ọrụ dị iche iche, ikikere, ịkọ akuko na arụ ọrụ, ha nwere ike ịchọ ụzọ nyocha maka ụlọ ọrụ ahụike na ego, ha ga-agarịrị nke ọma. N'ime mgbasa ozi mmekọrịta, nke a bụ oke ihe ịma aka n'ihi nnukwu nsogbu data na ọtụtụ nyiwe enweta.
Altimeter họọrọ Igwe mmiri as ike kacha ike iji gboo mkpa nke nnukwu ụlọ ọrụ. Econsultancy họọrọ Sprinklr nke kachasị elu ụlọ ọrụ nwere ike ịmepụta afọ 2 n'usoro. Na gafere 200 ezinụlọ aha ụdị dị ka ndị ahịa na nkenye ọnọdụ ruru ndị ọrụ 5000 na 10s nke mba… ha na-eduga mkpọ ahụ.
Sprinklr na-enye ezigbo usoro oru SaaS nke na-enye:
Ọchịchị Social gụnyere nnabata na nnabata akaụntụ gafere azụmaahịa dị n'ime yana ngalaba mpaghara.
Njikọ mmekọrịta gafee ọtụtụ akụkọ na ọwa (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr, Foursquare, Slideshare, Blogs wdg) tinyere ọrụ nhazi ọrụ na njikwa na-arụ ọrụ gụnyere ịtọ ụtọ, nhazi na ọtụtụ ọwa mbipụta.
Nlekọta ndị na-elekọta mmadụ gụnyere mmetụta na njikọ aka na-enye Social Analytics na-enye granular larịị ọwa na mgbasa ozi na-akọ na ịghọta.
Njikọ mmekọrịta na-enyere njikọ aka na usoro ọrụ azụmaahịa na usoro ịkọ akụkọ.
Ọ bụ ezie na e nwere ngwaahịa ndị ọzọ na-asọ mpi na oghere ụlọ ọrụ ahụ, enwere ụfọdụ ndịiche dị iche na Sprinklr. Nke mbụ, ha bụ naanị ụlọ ọrụ lekwasịrị anya. Ihe karịrị 80% nke ndị ahịa ha nwere ihe karịrị $ 1bn na ego ha nwetara. Usoro mgbasa ozi ha na-elekọta mmadụ na-enye akụrụngwa iji mee ka azụmahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwee ike ịgafe ọwa, otu, ọrụ, nkewa na ọdịdị ala. Ha wee wuo maka oke - ihe dịka Nhazi Asụsụ Eke, iwu akpaaka gụnyere nke na-akpata, omume na nzacha, ịchịkwa ọchịchị mmadụ. Mgbe ị na-emekọ ọnụọgụ ndekọ, mkparịta ụka, ma ọ bụ ndị ọrụ, ị ghaghị ịnwe ndị a ma ọ bụghị ya ị ga-anwụ.
Igwe mmiri bipụtara akwụkwọ akụkọ a n'oge na-adịbeghị anya, Omume Kacha Mma maka Enterlọ Ọrụ Na-echekwa Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi:
Tags: ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ mediaọrụ ntanetị mgbasa ozi ọha na ezeọtụtụ mgbasa ozi mgbasa oziotutu mgbasa ozi ndi mmadunhazi asụsụnchịkọta mmadụ mgbasa ozidashboard na-elekọta mmadụọchịchị mgbasa ozi mmekọrịta
N'azụ Facebook Dị ka Button